ICastello Izzalini Todi Resort Apt yabantu ababini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCastelloIzzalini
I-Apartment enegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elinesofa kunye nomabonwakude kunye nekhitshi elixhotyiswe ngayo yonke into (i-dishwasher, ifriji, iketile, i-microwave, iipleyiti zombane zokupheka).
Sleeping kwilali aphakathi apho ubomi ilandela isingqisho yendalo endalo kunye nexesha, yaxobuka ngokupheleleyo ukususela izimali imihla yethu kwaye singavumeli lilindwe iindonga zamandulo ezaye enqatyisiweyo 1194, xa umthetheli nanceba Ezzelino da Romano, kunye namadoda akhe yambamba wayiguqula yaba yinqaba enqatyisiweyo.
Inqaba inikezela ngamagumbi ahlaziyiweyo ngobuchule, ukuze uhlale ungalibaleki. Iindonga, zihlengahlengiswe ngokuthembekileyo, zigubungela iindwendwe kwindawo ye-fairytale.
Impahla, emele ukutolikwa kwakhona kwisitayile sefenitshala yamandulo eyayisetyenziswa kumaXesha Aphakathi, ibonelela ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo kunye nobuhle ngokuhambelana nendawo.
Iipatimenti zeentlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu bokuhlala okwandisiweyo, le yokugqibela inikezelwe kwabo bakhetha iNqaba ye-Izzalini njengesiqalo sokutyelela i-Umbria kunye nezixeko zayo zakudala.
Embindini we-Umbrian ridge, entliziyweni ye-Tiber Valley, iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwi-arteries edibeneyo yokudibanisa, kunokwenzeka ukulungelelanisa uhambo, iindlela zokuhamba, egameni lembali, ubugcisa, indalo kunye nokutya kunye newayini.
Ngaphaya koko, ukuhlala ixesha elide okunokwenzeka kunokuthanda utyelelo olucaciswe ngakumbi kuthathelwa ingqalelo ukuba iFlorence ayikabikho nokuba ziikhilomitha ezingama-200. Kwaye iRoma nje i-100 km. Zombini zifikeleleka ngokulula ngonxibelelwano lwemoto kunye noololiwe.
I-Izzalini: ubuncwane obukhethekileyo bexesha elidlulileyo elikude, ubugcisa bomlingo obukwaziyo ukugcina ilifa lelifa lexabiso elingenakulinganiswa neliqhubekayo kwaye liqhubeka linomtsalane kunye ne-enchant kude nengxolo kunye nesaqhwithi sehlabathi langoku, i-oasis yokuzola ifunyenwe.
Izitrato kunye neendlela eziwela kuyo zibalisa ibali, zichaza ukusetyenziswa kwayo, zinika ithuba elivela kwiifestile ukuze zibone inqaba yentsimbi kunye nophahla oluqhelekileyo ... ebusuku kunye nemini intsimbi yentsimbi ikhala i-chimes yeeyure.
Iposti apho uziva useluxolweni kunye nawe ufumanisa ubuhle obumnandi, obusulungekileyo njengekhadi leposi ... kwaye njengekhadi leposi ukuzola kunye nokuzola okuqhelekileyo kwilali yase-Umbrian.
Umbuki zindwendwe ngu- CastelloIzzalini